अमेरिकामा भेटिएको अनौठो चराको कथा : ‘आधा भाले, आधा पोथी’ - Khabar Break
राष्ट्रपति रनिङशिल्डको उपाधी बकैयाको बुद्ध माविलाई
मन्त्री फुयालद्वारा हेटौंडा-७ स्थित आशा विशेष पाठशाला तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको अवलोकन
रामचन्द्र पौडेलको भाइको निधनमा देउवाद्वारा दुःख व्यक्त
नेपालमा आज एकैदिन कोरोनाबाट थप १३ जनाको मृत्यु
माओवादी केन्द्रका चारजना सांसद पदमुक्त
कोरोनाविरुद्ध सचेतना अभियान सुरु
हेटौंडामा करेन्ट लागेर पाख्रिन दम्पतीको मृत्यु
महेन्द्र राउतमाथी धम्की, अभद्र व्यवहार
मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना बढ्दो : १० महिनामा ४६ जनाको मृत्यु, ३५१ घाइते
आजदेखि एक महिना कुलेखानी-फाखेल सडकखण्ड बन्द
सडक मानवमुक्त हेटौंडामा सडकपेटीमा सुतेको अवस्थामा एक पुरुष मृत फेला
हेटौंडा पनि कोरोनाको जोखिममा
अमेरिकामा भेटिएको अनौठो चराको कथा : ‘आधा भाले, आधा पोथी’
अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा एक पक्षीविद्ले आधा पोथी र आधा भालेजस्तो देखिने एउटा चराको तस्बिर खिचेका छन्।
उनकी एकजना साथीले नोर्दन कार्डिनल भनिने उक्त चरा देखा परेको बताएपछि पक्षीविद्ले आफ्नो क्यामरामा उक्त चराको तस्बिर लिएका थिए। द्विलिङ्गी वा उभयलिङ्गी चराहरू दुर्लभ हुन्छन्। भाले कार्डिनलहरू चम्किलो रातो रङ्गका हुन्छन् भने पोथीहरू फिक्का खैरो रङ्गका हुन्छन्।
यी रङ्गको मिश्रणले चरा द्विलिङ्गी भएको सङ्केत गर्न सक्ने पक्षीविज्ञ बताउँछन् । बीबीसीसँग कुरा गदै अवकाशप्राप्त पक्षीविज्ञ जेमी हिलले भने, ‘यो जीवनकालमै एउटा र लाखौँ साक्षात्कारमध्येको एउटा थियो ।’
हिलका साथीले उनलाई उनले एउटा ‘अस्वाभाविक’ चरा देखेको बताएकी थिइन्। सुरुमा हिलले उक्त चरा ‘लूसिस्टिक’ होला भन्ठानेका थिए। चराले आफ्नो प्वाँखमा हुनुपर्ने रङ्ग अर्थात् पिग्मेन्टेशन गुमाएको अवस्थालाई ‘लूसिसिजम्’ अर्थात् ‘पाण्ड’ भनिन्छ।
उनलाई सुरुमा उक्त चरा आधा भाले र आधा पोथी भएको जस्तो लागेको थिएन। तर मोबाइलमा तस्बिरहरू हेरेपछि उनले उक्त चरालाई ‘बाइल्याटरल गाइन्यान्ड्रोमर्फिजम’ भएको हुन सक्ने आशङ्का गरेका थिए।
बाइल्याटरल गाइन्यान्ड्रोमर्फिजम भएका चरामा काम गर्ने अवस्थाकै अण्डाशय र डिम्बाशय दुवै हुन्छन्। उनी उक्त कार्डिनल चरा देखिएको स्थानमा गए। एक घण्टाभित्र उनी उक्त अस्वाभाविक चराको तस्बिर लिन सफल भए।
ूघर पुगेर आफुसँग केका तस्बिरहरू थिए भनेर नहेरुन्जेलसम्म फोटो खिचेको पाँच घण्टासम्म मुटु ढुकढुक गरिरहेको अनुभव उनले सुनाए ।
उनले करिब दुई दशकदेखि लोपोन्मुख हात्तीदन्ते काठफोरा ९एकखाले लाहाँचे चरा० खोजिरहेको थिएँ। तर उनले घरपछाडि पाइने एउटा सामान्य चराको दुर्लभ अवस्थाको तस्बिर लिइरहँदा उनी काठफोरा भेटे बराबर नै उत्साहित थिए ।
आधा भाले र आधा पोथीको रूप भएका चराहरू भेटिनु निकै दुर्लभ घटना भएको वेस्ट्रर्न इलनोई विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ब्रायन पीयर बताउँछन्। उनले अमेरिकाका नोर्दन कार्डिनल चराहरूमा ‘बाइल्याटरल गाइन्यानन्ड्रोमर्फिजम’ को सर्वेक्षण गरेका छन्।
शुक्रकीटले डिम्बलाई निषेचन गरेपछि भ्रूण बन्न कोषहरू विभाजन हुने क्रममा त्रुटि हुँदा यस्तो अवस्था आउने उनी बताउँछन्। तर उक्त क्षेत्रमा सम्भावित यस्तो किसिमको चरा देखिएको पहिलो पटक होइन।
न्याश्नल जियोग्राफिकका अनुसार सन् २०१९ मा एक दम्पतीले नजिकैबाट त्यसै क्षेत्रमा यस्तै चरा देखेका थिए। हिल अहिले देखिएको चरा पनि त्यही हुन सक्ने अनुमान गर्छन्।
प्राध्यापक पीरका अनुसार नोर्दन कार्डिनल उत्तरी अमेरिकामा जताजतै पाइने चरा हो। यसको भाले र पोथीलाई सहजै चिन्न सकिने भएकाले उभयलिङ्गी चरा चिन्न पनि सजिलै सकिने उनको भनाइ छ। बीबीसी
अर्काको पासवर्डबाट नेटफ्लीक्स हेर्न नपाइनेअर्काको पासवर्डबाट नेटफ्लीक्स हेर्न नपाइने
यस्तो झरना जसबाट १५६० फिटको उचाईबाट झर्छ आगो
खाने हो २३ क्यारेट सुनबाट बनेको संसारकै महँगो बिरयानी ?
यी व्यक्ति जसले चार किमी दूरीबाट दुलही ल्याउन गरे हेलिकोप्टर चार्टर्ड
अनौठो परम्परा,जहाँ मानिसलाई जिउँदै गाड्ने गरिन्छ !
जापानी महिलाले १० वर्षसम्म आमाको शव घरमै राखिन्, यस्तो छ कारण
नेपालकै लामो नङ भएका दिनेशसिंह, विश्वमै नङ पालेर नाम उच्च पार्ने छ धोको
धार्मिक ग्रन्थअनुसार मंगलबार यौन सम्बन्ध किन राख्नु हुँदैन् ?
चर्काे दबावपछि प्राइभेसी पोलिसीबाट पछि हट्यो ‘ह्वाट्सएप’
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण बुटवलमा तीनको मृत्यु